10-kii heshiis ee ugu sarreeyey oo ka dhacay suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan, kaasoo xalay la soo gabagabeeyey – Gool FM
(Yurub) 06 Okt 2020. Xalay ayaa la soo gabagabeeyey suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, waxaana ka dhacay heshiiyo aan horay loo sii filaynin iyo kuwo la sii qorsheeyey labadaba.
Haddaba waxaan halkaan ku eegeynaa 10-kii heshiis sarreeyey oo ka dhacay suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan amaba ahaa xiddigihii lacagaha badan lagula wareegay.
Xiddiga ugu sarreeya ee suuqan lagala wareegay kaasoo lagu qaatay lacagta ugu badan oo dhan 73.2 milyan oo gini oo u dhigta 94.9 milyan oo dollar, waxa uu laacibkan ka soo tagay Lille, isagoo ku biiray kooxda Napoli.
Laacibka labaad ee lacagaha ugu badan lagu qaatay suuqa dhowaan soo dhammaaday waa xiddiga ay Chelsea kala soo wareegtay Bayer Leverkusen ee Kai Havertz, kaasoo ay kula soo wareegeen 72 milyan oo gini oo u dhiganta 93.3 milyan oo dollar.
Waxaa booska saddexaad soo xirtay Arthur oo ka tagay Barcelona isla markaana Juventus ugu wareegay adduun dhan 66 milyan oo gini oo la mid ah 85.6 milyan oo dollar.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-kii heshiis ee ugu sarreeyey oo ka dhacay suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan, kooxaha ay ka soo tageen kuwa ay ku biireen iyo lacagta lagula wareegay:-
“Messi waligiis ma joogi doono... Griezmann waa mustaqbalka Barcelona” – Olivier Giroud